Maraykanka oo askar kala baxaya Yemen. - Wargeyska Faafiye
Maraykanka oo askar kala baxaya Yemen.
Maraykanka ayaa la sheegay inuu milaterigiisa kala baxayo saldhig ku yaalla Yemen, sababo la xiriira nabadgelyo darro aaggaas ku sii korortay. Ciidanka oo ay ku jiraan askarta gaarka ah ee kumaandoska ayaa la sheegay in laga saari doono saldhigga Al-canad ee ku yaalla koofurta.
Dagaalyahannada Al Qaacida ayaa weeraray magaalo halkaas u dhow Jimcihii, ka hor intii aysan ka saarin xoogag maxalli ah.
Waxaa la rumaysan yahay in saldhigga Al-canad loo isticmaali lahaa in lagu tababaro askarta xukuumadda Yemen, dagaalka ay kaga hor jeedaan Al-Qaacida ee koofurta dalka. Milateriga Maraykanka weli wax faallo ah kama bixin wararka sheegaya inay ciidankooda xeradaas kala baxayaan.
Recent PostsBoqorka Sacuudiga oo wiilkiisa ka dhigay dhaxal sugeDaawo VIDEO : ‘Gaajo ayuu u dhintay wiil aan dhalay oo shan jir ahaa’Ahmed Kathrada, ninkii la xirnaan jiray Mandela, oo dhintayGeneral favors more aggressive approach in SomaliaUNHCR oo dalbatay baaritaan laagu sameeyay qaxootigii Soomaalida ee Yaman lagu laaayay.Editor’s Pick . Telefoonkii Hitler oo $243 kun oo dollar lagu iibsaday.43Random PostsDF oo dib u dejin u samaynaysa ganacsatada.Mother of Somali boy beaten to death testifies as the stepfather goes on trial.Ciyaar yahan udhashay Dalka Jarmalka oo qaatey Diinta IslaamkaSomali president names new prime minister.Maraykanka ayaa sheegtay weerarkii Baraawe.